Ubudala beDijithali buTshintsha ngokukhawuleza yonke into | Martech Zone
Xa ndithetha nabasebenzi abancinci ngoku, kuyothusa ukucinga ukuba abazikhumbuli iintsuku esasingenayo i-Intanethi. Abanye abakhumbuli ixesha ngaphandle kokuba babe ne-smartphone. Uluvo lwabo lwetekhnoloji ihlala ihleli ukuba iyaqhubeka ukuqhubela phambili. Besinamaxesha eminyaka ebomini bam apho inkqubela phambili yetekhnoloji ihleli khona… kodwa akusekho njalo.
Ndikhumbula ngokucacileyo ndisebenza kunyaka omnye, iminyaka emi-1 kunye noqikelelo lweminyaka eli-5 yamashishini endandisebenza kuwo. Ngoku, amashishini anexesha elinzima lokubona okwenzekayo kwiveki ezayo- ungaze ucinge kunyaka olandelayo. Kwindawo yetekhnoloji yentengiso, inkqubela phambili engummangaliso iyaqhubeka nokudlala indima, nokuba zizixhobo zekhompyuter zakho, idatha enkulu, okanye ukudityaniswa kunye nokudityaniswa. Yonke into ihamba kwaye iinkampani eziswele amandla okutshintsha zikhawuleza zishiywe ngasemva.
Omnye umzekelo obalaseleyo ngamajelo eendaba. Amaphephandaba, ividiyo kunye nomzi mveliso womculo bonke bazabalaze ukuza ekuqondeni ukuba umboleki okanye ishishini linokufumana nantoni na eyifunayo kwi-intanethi, kwaye kunokwenzeka ukuba bayifumane ngemali encinci okanye bangabinayo kuba umntu ekulungele ukuyinikela kancinci. Umyalelo we-monolithic kunye nolawulo lwee-empire ezakhiweyo azisakwazi ukugcina ukubambelela kubutyebi babo. Kwaye ukusilela kwabo umbono wokutyala imali kwiminyaka yedijithali, ithamsanqa limkile. Ngelixa ibango lenyukile!
Akukapheli, nangona kunjalo. Asisoloko sabelana ngetekhnoloji ye-infographics, kodwa ndiyakholelwa kwiindlela ezikhulayo ezivela kulo infographic Shredders yeNeeda yalatha inkqubela phambili enokuthi ichaphazele umbono wakho wendlela amashishini akho aza kusebenza ngayo kwixa elizayo. Ewe kunjalo, oko kuya kuba nefuthe kwimizamo yakho yentengiso nayo.
tags: Ukuprintwa kwe3duhlalutyo oluphambiliUqikelelo lweshishiniamagosa aziintloko eedathaamagosa aziintloko edijithaliikhompyutha yabathengiukhomyutha yamafuikhompyutha kuyo yonke indawoIinkqubo ezityebileyo kwimekoUDaryl plummerkwi-infographicizisekointanethi izintouhlalutyo olungabonakaliyoimfunekokufuneka ii-shredersUhlalutyo olugcweleyoukhuseleko olusekwe kumngciphekoiirobhothiukuzikhuselaoomatshini abakrelekreleizicelo ezichazwe kwisoftwareintanethi yezintoUbungakanani bewebhu IT
Ezona ntsomi zili-15 zeNtengiso ye-imeyile ekufuneka uyazi
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2014 ngo-11: 19 PM
I-infographic ilungile !!!
Impendulo yeevesi zokuxela intle kakhulu. !!!!
Yups kwixa elizayo iindleko zokuthengisa ngentengiso yedijithali ziya kuncipha kwaye ukhuphiswano luqhubeke lukhula.